Ekuthandazeleni Ukuthola Umsebenzi, Ngizuza Okungaphezulu Komsebenzi nje | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2019-10-18 04:28:48 22
Kwase kunesikhathi ngizwe ukuthi iJapan yayiyizwe elihle ngempela ukuya kulo. Emva kokufika eJapan ngo-Ephreli 2015 ngase ngibona ukuthi izinto zazizinhle ngempela lapho nokuthi abantu nabo babehlonipha futhi benothando, ngafisa nakakhulu ukuthola umsebenzi futhi ngizinze eJapan.
Kodwa ngase ngizwa umuntu engangimazi owayeseke wasebenza eJapan ethi kwakunzima kakhulu kwabavela emazweni angaphandle ukuthola umsebenzi lapho, nokuthi kuba lula kakhudlwana uma ungaphasa izifundo zokuba ngumdayisi wezindlu. Ngakho, emva kokuphasa ekolishi lami lolimi, ngakhetha ngaphandle kokungabaza ukwenza isifundo esiphezulu eziqwini zezomnotho esasibeka phambili iziqu zokuqasha nokuba uchwepheshe, ngase ngithatha ukuba ngumthengisi wezindlu njengenjongo yami ekhethekile. Emva kwesikhathi sokufunda kanzima, ngaze ngasiphasa isivivinyo.
Ukuze ngenze ngcono amathuba ami okuqashwa, ngaphandle kokuthola ilayisensi yami yokuthengisa izindlu, ngenza okunye ukuhlolwa ukuze ngithole amanye amalayisensi, isifinyezo somlando wami wokusebenza sase sigcwala ngokwengeziwe. Lapho ngibuka isifinyezo somlando wami, ngakhuluma ngedwana ngathi, “Akusho lutho okwezinkampani zezindlu, lapho ezinye izinhlobo zamabhizinisi zibona zonke izitifiketi enginazo, nakanjani zizongiqasha.” Kwakuzwakala kumnandi kakhulu ukucabanga lokhu.
Ngigcwele ukuzethemba, ngathumela isifinyezo somlando wami ezinkampanini ezimbalwa ngicela imisebenzi, kodwa okwangimangalisa, konke engakuthola kwaba ukuchithwa okulandelanayo. Ngashaqeka, ngase ngicabanga: “Kodwa nginezitifiketi eziningi kangaka, ngiyakwazi ukukhuluma isiShayina, futhi ngingasiza ekuhumusheleni amabhizinisi akwamanye amazwe. Ngabe izinkampanni ezidayisa izindlu azibadingi abantu abafundele ukuba abadayisi bezindlu? Kungani benganginiki nethuba nje lokuba ngenze inhlolokhono?” Ngazizwa ngidikibala kakhulu futhi ngezwa kusengathi ngase ngivele ngisebenze kakhulu ukuze ngithole zonke lezi zitifiketi. Uma ngingenakuthola umsebenzi senginazo zonke lezi ziqu, khona-ke yimuphi omunye umgudu owawungase ungivulekele? Kwaba sengathi kukhona owayethululele ibhakede lamanzi abandayo phezu kwami, futhi lonke ugqozi engangikade ngiluzwa lwase luphole kakhulu. Ngaya ngokuya ngiphelelwa yikho konke ukwethemba ukuthi ngiyoke ngithole umsebenzi.
Ngangithe nginganakile, kanti isikhathi esihle kakhulu sokuthola umsebenzi sasedlule nginganakile, futhi izinkampani eziningi zazingasaqashi, kanti ke izinkampani ezazidinga abakwamanye amazwe zase zimbalwa ngokwengeziwe. Ngenqaba ukuvumela ukuba umsebenzi wami onzima ube yize leze, nokho, ngakho-ke ngahamba ngayobuza abafundisi bami ngasese ukuthi zazikhona yini izinkampani ezaziqasha abavela kwamanye amazwe, kodwa ngagcina ngizizwa ngidumele kakhulu. Ngabona masinyane ukuthi, ngaphandle kwami nomunye umfundi owayevela kwelinye izwe, bonke abanye ababekade besekilasini lami base beyitholile imisebenzi. Ngaqala ukukhathazeka ngokwengeziwe, futhi angikwazanga ukugwema ukukhathazeka ngekusasa lami: “Ngabe ngiyoke ngikwazi ukuthola umsebenzi uma lokhu kuqhubeka? Ngizokwazi ukuhlala eJapan?”
Ngachitha amasonto amabili alandelayo ngithumela isifinyezo somlando wami, kodwa akwenzekanga lutho. Ngazizwa ngidikibele futhi ngikhathazeke kakhulu ngalesi simo sezinto, ngase ngicabanga ngingedwa: “Ngiyokwenzenjani uma ngingawutholi nhlobo umsebenzi?” lapho ngicabanga nakakhulu ngalokhu, ngakhathazeka ngokwengeziwe. Khona lapho, ngacabanga ngoNkulunkulu, ngase ngiphuthuma ngiya phambi kukaNkulunkulu ukuze ngithandaze, ngicela ukuba uNkulunkulu azothise inhliziyo yami ekhathazekile bese engihola kule ngxaki. Ngosuku olulandelayo, ngahamba ngayohlangana nomunye wodadewethu basebandleni ngase ngimxoxela konke ngokuthungatha kwami umsebenzi. Emva kokungilalela, wangifundela isiqephu samazwi kaNkulunkulu: “Abanye abantu bakhetha imfundo enhle emakolishi bagcine sebethole umsebenzi obagculisayo ngemva kokuthola iziqu, okuyinjabulo yokuqala abayithola ohambweni lwempilo yabo. Abanye abantu bafunda baze babe ngompetha bamakhono athile kodwa bengawutholi umsebenzi abawufunayo, bengatholi ikusasa abalifunayo; ekuqaleni kohambo lwabo empilweni yonke into ibonakala ingahlangani, kugcwele izinkinga, amathemba abo eshabalala nokuphila kwabo kungaqiniseki. … Kuyohlale kunegebe elikhona phakathi kwephupho lomuntu nento engokoqobo umuntu okumele abhekane nayo; izinto azenzeki ngendlela umuntu abengafisa ngayo, abantu ababhekene nezinto ezinjalo ekuphileni abasoze bathola ukwaneliseka noma ukugculiseka. Abanye abantu bangaze benze ngisho nezinto ezingacabangeki, benze imizamo emikhulu futhi banikele ngezinto ezinkulu ngenxa yokuziphilisa nekusasa labo, ngomzamo wokuguqula ukudalelwa kwabo. Kodwa ekugcineni, ngisho noma bengawafinyelela amaphupho nezifiso zabo ngenxa yokusebenza kanzima, abasoze baguqula ukudalelwa kwabo, kungakhathaleki ukuthi bazama kangakanani ukuguqula lokho ikusasa elibabekele khona. Akunandaba ukuthi abantu bahlukene kangakanani ngokwamakhono, izinga lokuhlakanipha, namandla, bonke abantu bayalingana ekudalelweni, lokho okwenza ungabi bikho umehluko phakathi kokukhulu nokuncane, kokuphakeme nokuphansi, kophezulu nompofu. Ukuthi yimuphi umsebenzi wokuziphilisa umuntu awuphishekelayo, lokho umuntu akwenzayo ukuze aziphilise, kanye nomcebo umuntu awuqongelelayo ekuphileni akunqunywa abazali bakhe, amakhono akhe, umzamo wakhe noma izifiso zakhe, kodwa kunqunywa kusengaphambili uMdali” (“UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III”).
Udadewethu wayesenginika ukuhlanganyela, wayesethi, “Njengabantu, iziphetho nekusasa lethu kubuswa futhi kuhlelwa uNkulunkulu, futhi ukuthi yiluphi uhlobo lwemisebenzi esinayo nokuthi sikwazi ukuwuthola nini umsebenzi empilweni konke kwamiselwa kudala nguNkulunkulu; akunqunywa neze ukuthi sisebenza kanzima kanjani noma iyiphi enye into ekhona emhlabeni ongaphandle. Bheka abantu abasizungezile, isibonelo nje. Abanye bafunda kakhulu futhi bathole lonke uhlobo lwezitifiketi neziqu, futhi baze bayofunda naphesheya, nokho futhi emva kokuthweswa iziqu bahlala bengaqashiwe beduve ekhaya, futhi bangawutholi umsebenzi ofanele. Abanye abantu, kokunye, bathola imiphumela ejwayelekile nje ezifundweni zabo futhi abafundile ngokuphakeme, kodwa ngenxa yokuthi banekhono elithile elikhethekile bayaqhubeka bathole umsebenzi omuhle, futhi abanye baze baqale amabhizinisi abo bese beziphatha bona. Siyabona-ke ukuthi uNkulunkulu ubusa futhi uhlela isiphetho nekusasa lethu, futhi akukho neze ezandleni zethu. Asibuboni ubukhosi bukaNkulunkulu, nokho, ngakho futhi ngisho singakholwa kuNkulunkulu, siqhubeka nokungathandazi noma ukungathembeli ngobuqotho kuNkulunkulu, futhi asethuli kuNkulunkulu udaba lokuthola umsebenzi noma sithobele ubukhosi Bakhe. Kunalokho, sikholwa ukuthi sineziqu nezitifiketi eziningi, nokuthi sikwazi ukukhuma isiShayina nokuhumusha izilimi zamanye amazwe, ngakho sicabanga ukuthi imiqondo yethu namazinga ethu kuzokwenela ukuba sikwazi ukuthola umsebenzi omuhle—ngabe asivukeli uNkulunkulu ngokwenza lokhu? Lapho, ekuthungatheni kwethu umsebenzi, sifika kwangqingetshe noma sihlangana neshwa, asifuni intando kaNkulunkulu, kodwa kunalokho siphelelwa umdlandla futhi sidumale, siphila esimweni sokucindezeleka, futhi lapho silandela le ndlela nakakhulu, silahleka nakakhulu. Empeleni, nguNkulunkulu futhi ovumela lolu hlobo lwesimo ukuba lusehlele, futhi izinhloso Zakhe ezinhle zikhona ngokwengeziwe lapho phakathi. UNkulunkulu usebenzisa la mashwa nokwehluleka ukuze asikhuthaze ukuba sicabange ngathi futhi sizazi, ukuzwa nokubona ubukhosi bukaNkulunkulu ezimweni ezinjalo, ukufunda ukuthembela kuNkulunkulu kuzo zonke izinto, kanye nokuthobela izinhlelo namalungiselelo kaNkulunkulu. Ngakho, ngenkathi sithungatha umsebenzi, kufanele sithandaze futhi sithembele kuNkulunkulu kaningi nakakhulu, sifune ukuqondisa kukaNkulunkulu, futhi sethembe ukuthi konke uNkulunkulu asilungiselela khona kuhlala kuyilokho okusilungele kakhulu, nokuthi konke nje okudinga sikwenze ukuba sedlule kukho ngesizotha.”
Emva kokulalela ukuhlanganyela kukadadewethu, ngaqonda ukuthi uhlobo lomsebenzi esigcina siwutholile umiselwe ngaphambili nguNkulunkulu. Nokho, ngangingabubonile ubukhosi bukaNkulunkulu, kodwa kunalokho ngangihlala ngikholwa ukuthi, ngoba ngangikwazi ukukhuluma kokubili isiShayina nesiJaphane, nangenxa yokuthi ngangineziqu nezitifiketi eziningi, ngakho-ke ukuthola umsebenzi kwakuzoba lula. Kodwa ekugcineni, ngase ngizame isikhathi eside kakhulu kodwa futhi nganginganikezwanga ngisho ithuba lenhlolokhono. Lapho ngifika kwangqingetshe futhi ngehlelwa yishwa, ngaqala ukuphila esimweni sokudikibala, futhi lobu buhlungu babudalwe kuphela yiqiniso lokuthi ngangingabuboni ubukhosi bukaNkulunkulu. Lapho sengiziqondile lezi zinto, inhliziyo yami yezwa ikhululeke ngokwengezwe kakhulu.
Kamuva, ngafunda esinye isiqephu samazwi kaNkulunkulu: “Abantu bachitha isikhathi sabo esiningi bephila esimweni sokuquleka. Abazi noma kulungile yini ukuthembela kuNkulunkulu noma ukuzethemba bona. Khona-ke isikhathi esiningi bakhetha ukuzethemba bona, ukuthembela ezimweni ezibazungezile ezinenzuzo, kanye nakubantu, izigameko nezinto ezibazungezile ezibazuzisayo. Yilokhu abantu abamandla kakhulu kukho. Abantu abehluleka kakhulu kukho ukuthembela kuNkulunkulu nokubheka kuNkulunkulu, ngoba babona sengathi ukubheka kuNkulunkulu kukhathaza ngokwedlulele. Abakwazi ukumbona noma ukumuzwa, futhi babona sengathi akucacile nokuthi akunaqiniso ukwenzenjalo. Ngakho abantu behluleka kakhulu kulesi sifundo, futhi ukungena kwabo kuso kukha phezulu kakhulu. Uma ungafundi ukubheka kuNkulunkulu nokuthembela kuNkulunkulu, awusoze wawubona umsebenzi uNkulunkulu awenza kuwe, noma ukuqondisa nokukhanyiselwa akunika khona. Uma ungakwazi ukubona lezi zinto, khona-ke amazwi athi, “UNkulunkulu ukhona futhi uqondisa konke empilweni yesintu”, ekujuleni kwenhliziyo yakho, ayogcina ngophawu lokubuza, hhayi ngophawu lukangqi noma lwesibabazi. “Ngabe uNkulunkulu uqondisa konke empilweni yesintu?” “Ngabe uNkulunkulu ubuka ekujuleni kwenhliziyo yomuntu?” Kungasizathu sini ukuba wenze kube yimibuzo? Lokhu kungenxa yokuthi awuthembeli ngokweqiniso kuNkulunkulu noma ubheke Kuye, ngakho-ke ngeke ukwazi ukuba nokukholwa okuyiqiniso kuNkulunkulu. Uma ungakwazi ukuba nokukholwa okuyiqiniso kuNkulunkulu, khona-ke izimpawu zokubuza ziyoba khona unomphelo ngakho konke uNkulunkulu akwenzayo, futhi ngeke kube khona ongqi.” (“Amakholwa Kuqala Adinga Ukubona Ngaleya Kwemikhuba Emibi Yomhlaba”). Ngenkathi ngizindla ngala mazwi ngabona ukuthi, nakuba ngangikholwa kuNkulunkulu, ngangingakunakanga ukwethembela kuNkulunkulu noma ukubheka kuNkulunkulu kuzo zonke izinto, noma ukuhlangana nomsebenzi kaNkulunkulu ngokoqobo. Kunalokho, ngangethembele emqondweni nasezingeni lami ezenzweni zami, okwakuholele ekuthini ngingabi nakho ukwazisa noma ukuqonda ngokweqiniso ubukhosi bukaNkulunkulu, ngase ngibona ukuthi ukholo lwami kuNkulunkulu lwakungajulile, futhi kwakungelona olwangempela. Ngenkathi ngifinyelela kulokhu kuqonda, ngabona ukuthi ukuvumela kukaNkulunkulu ukuba lesi simo singehlele impela kwakunazo izinhloso ezinhle ngemuva kwakho. UNkulunkulu wayesebenzisa lesi simo esibi ukungenza ngibuyele phambi Kwakhe ukuze ngicabange ngami futhi ngizazi, ukungenza ngifunde ukwethembela nokubheka kuNkulunkulu, ukuhlangana nomsebenzi Wakhe kulesi simo samanje nokubona ubukhosi Bakhe, ngalokho ngizuze ukholo lweqiniso kuNkulunkulu. Lapho ngiqonda intando kaNkulunkulu, ngagcwala ukumbonga. Ngazimisela ukubeka kuNkulunkulu ukuthungatha kwami umsebenzi nokubheka Kuye kulolu daba, futhi noma ngiyawuthola umsebenzi noma cha, ngazimisela ukuthobela izinhlelo namalungiselelo Akhe.
Ngosuku olulandelayo, ngaqala ukuthungatha imisebenzi ku-inthanethi njengoba ngangihlala ngenza, ngase ngihlangana nenkampani edayisa izindlu eyayiqasha abafundi abavela kwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, indawo inkampani eyayikuyo yayiphakathi neTokyo, kwakunamaholidi anqunyiwe, futhi kungadingeki nhlobo ukusebenza isikhathi esengeziwe. Uma ngangingathola lo msebenzi, ngangiyokwazi ukusebenza futhi ngiye emihlanganweni yebandla—umsebenzi wawungilungele ngokuphelele. Ngacabanga ngedwa: “Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uwulungisele mina lo msebenzi? Noma kunjani-ke, ngizofaka isicelo bese ngibona.” Kanjalo-ke, ngathumelela le nkampani isifinyezo somlando wami kwathi, okwangimangalisa, emizuzwini nje base bengishayele ukuze bahlele isikhathi sokwenza inhlolokhono. Emva kokuba isiphelile ingxoxo yocingo, ngangilokhu ngibonga kuNkulunkulu, futhi ngabona ukuthi lapho ngibeka kuNkulunkulu ukufuna kwami umsebenzi nokuzimisela ukuthembela kuNkulunkulu nokuthobela ubukhosi namalungiselelo Akhe, ngempela uNkulunkulu wangivulela indlela.
Ngaphezu kokuthokoza kwami, nokho, ngaphinde ngezwa ngikhathazekile. Ngoba ngangilokhu ngiwumuntu ongakhulumi kakhulu, kusuka ebunganeni, ngangingemuhle ekukhulumeni nabantu, futhi ukukhuluma kwakungelona ikhono engangiqinile kulo. Ngaphambili, njalo lapho ngibe nenhlolokhono khona, ngangiye njalo ngakhe uhlu lwezihloko engangibuzwa ngazo bese ngizifaka ekhanda, futhi ngangiye ngikwazi kuphela ukubhekana nenhlolokhono ngesizotha lapho ngiyilungiselele ngokugcwele. Ngale kwalokhu, ngenxa yokungabi nokuzethemba kanye novalo lwami, njalo lapho ngingena kunhlolokhono, ngangiye ngikukhohlwe ngokushesha konke engangikubeke ekhanda. Le nhlolokhono yayiqhamuke ngingayilindele futhi ngangingenzanga malungiselelo nhlobo—yini okwakufanele ngiyenze? Khona lapho, ngabona ukuthi ngangiphila esimweni sokukhathazeka nokwethuka, ngakho-ke ngaphuthuma ngaya phambi kukaNkulunkulu ukuze ngithandaze futhi ngifune ukuqondisa Kwakhe, kwase kufika la mazwi emqondweni wami: “Izimpilo zabo kulo mhlaba azizodwa. Isintu sinokunakekela kukaNkulunkulu, uNkulunkulu unabo; abantu bangancika kuNkulunkulu njalo; Yona ingumndeni wawo wonke umuntu kubalandeli Bayo. Uma unoNkulunkulu ongancika Kuye, isizwe ngeke siphinde sibe nomzwangedwa noma siswele usizo” (“Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III”). “Yebo,” ngacabanga. “UNkulunkulu ubusa futhi uphethe zonke izinto, futhi uqondisa izimpilo zethu nsuku zonke. UNkulunkulu ungumlekeleli nensika yethu eqinile. Nakuba ngizoya kule nhlolokhono ngedwa, uNkulunkulu uzobe enami, futhi uNkulunkulu uzobe engiqondisa, yini okufanele ngikhathazeke ngayo? Uma nje ngisathembele ngobuqotho kuNkulunkulu, khona-ke uNkulunkulu uzongiqondisa futhi angihole endleleni engaphambili.” Ngase ngicabanga ngendaba eseBhayibhelini lapho uMose ehola ama-Israyeli ewakhipha eGibhithe. Lapho uNkulunkulu ebiza uMose, nakuba uMose wabika ukuthi unamalimi futhi akamuhle ekukhulumeni, akazange ahlupheke ngakho noma abe novalo, ngoba wayazi ukuthi zonke izinto zazisesandleni sikaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu wayezomqondisa futhi amhole. Ngakho futhi, wakwamukela ngokuzethemba ukuthunywa nguNkulunkulu, futhi ngokwethembela kuNkulunkulu, wahola ama-Israyeli ewakhipha eGibhithe ngaphandle kwenkinga. Ngicabanga lokhu, amandla nokuzethemba kwangena ngokushesha enhliziyweni yami, ngase ngicabanga: “UNkulunkulu ungumlekeleli nensika yami, futhi kufanele ngethembele kuNkulunkulu futhi ngethembele okholweni lwami ukuze ngizwe, ngibone futhi ngithobele ubukhosi bukaNkulunkulu.”
Ngaphambi kwenhlolokhono, ngathandaza njalo kuNkulunkulu, ngimcela ukuba angiqondise futhi angiholele phambili. Ngenxa kaNkulunkulu, lapho inhlolokhono iqala, angizizwanga nginovalo ngokwedlulele, futhi ngakhuluma kahle nalowo owayengihlola. Owayengihlola wangitshela ngalo lelo langa ukuthi ngangiphumelele, sase sihlela isikhathi senhlolokhono yesibili.
Endleleni yami eya ekhaya, ngacula ihubo lokudumisa uNkulunkulu futhi ngangithokoze kakhulu. Ngabona kulokhu engangihlangene nakho ukuthi lapho ngethembele futhi ngabheka kuNkulunkulu ngobuqotho, uNkulunkulu wasebenzisa amazwi Akhe ukungiqondisa nokungihola, futhi wangenza ngezwa ngokuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu wayekhona lapho eceleni kwami; kwakungenalutho olungacacile ngoNkulunkulu lapho ngincike Kuye, futhi ukholo lwami kuNkulunkulu lwakhula.
Izinhlolokhono zazenziwa ngezigaba, futhi emva kokuba sengiphumelele inhlolokhono yesibili, ngamenywa ngokushesha kunhlolokhono yesithathu. Kulokhu, abahloli kwakungabaphathi ababili beminyango, futhi lapho ngibona ubuphezulu bezikhundla zabahloli buya ngokuya bukhula isikhathi ngasinye, ngehluleka ukungakhathazeki futhi, ngase ngicabanga: “Abahloli kulokhu ngabaphathi ababili beminyango futhi nakanjani bazoba nezimfuno eziqine kakhulu. Uma ngingenzi kahle, khona-ke bazongikhipha emgqeni ngezwi elilodwa, bese ngibuyela emuva lapho engangiqale khona. Noma ngingathembela kuNkulunkulu, ekugcineni isiJaphani sami asisheleli kahle, pho bangangiqasha ukuba ngisebenze enkampanini yabo noma kunjalo?” Lapho ngicabangisisa ngakho, ukuzethemba kwami kwehla kakhulu, futhi kulapho ngazizwa ngokuqinisekile ukuthi nakanjani ngangizokwehluleka kunhlolokhono.
Lapho kufika usuku lwenhlolokhono, kwakhula ukukhathazeka futhi angaze ngakwazi nhlobo ukuzotha. Ngabona ukuthi isimo sami sasingalungile, ngakho ngaphuthuma ngathumela umyalezo kudadewethu wasebandleni ngimxoxela ngobunzima bami. Wayesengithumelela isiqephu samazwi kaNkulunkulu: “UNkulunkulu uwukuphela kweNkosi yo muntu, uNkulunkulu uwukuphela kweNkosi yokudalelwa komuntu, ngakho akunakwenzeka ngomuntu ukuba anqume ukudalelwa kwakhe, futhi awukwazi. Kungakhathaleki ukuthi umuntu unamakhono amakhulu kangakanani, ngeke akwazi ukuthonya, ingasaphathwa eyokuqondisa, ukuhlela, nokulawula noma ukuguqula imiphumela yabanye. UNkulunkulu oyingqayizivele uqobo Lwakhe kuphela onganquma konke ngomuntu, ngoba nguye onegunya eliyingqayizivele elinobukhosi phezu kokudalelwa komuntu; futhi uMdali kuphela oyiNkosi yomuntu eyingqayizivele” (“Umsebenzi kaNkulunkulu, UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III”). Udadewethu wanginikeza ukuhlanganyela, ethi, “UNkulunkulu unguMdali futhi uyiyo kuphela iNkosi yesiphetho sesintu. Igunya Lakhe liyingqayizivele, ngakho noma ngabe umuntu unekhono kangakanani, noma unamandla kangakanani noma unesikhundla esiphakeme kangakanani, akasoze edlula ubukhosi bukaNkulunkulu, ingasaphathwa eyokuguqula isigcino sanoma ngubani. Empeleni, ukuthi siyayiphasa inhlolokhono noma cha akulele kumhloli, kodwa kuncike kuNkulunkulu. Kodwa sisavinjwa futhi siboshwe yilabo abanamandla nesikhundla, futhi sithatha izinqumo zalaba bantu njengegunya eliphezulu kakhulu. Kulokhu, siyabona ukuthi asinandawo kaNkulunkulu ezinhliziyweni zethu nokuthi asiliboni igunya likaNkulunkulu, futhi lokho kuyisona sodwa isizathu sokukhathazeka kwethu nokwesaba kwethu. Dadewethu, kufanele sikholwe ukuthi uNkulunkulu unguMdali futhi zonke izinto zisezandleni Zakhe. Namuhla, sizozwa futhi sazise ubuqobo begunya nezenzo zikaNkulunkulu futhi, ngale ndlela, ukuhlangana nezinto kwethu ngokwengeziwe, kusenza sibone izenzo zikaNkulunkulu ngokwengeziwe, futhi ukukholwa kwethu kuNkulunkulu kuyoqhubeka kukhule. Kulapho kuphela lapho ukholo lweqiniso kuNkulunkulu luyophakama phakathi kithi.”
Ngokufunda amazwi kaNkulunkulu nokulalela ukuhlanganyela kukadadewethu, angibange ngisezwa ngikhathazekile futhi nginovalo kangako, futhi ngabona ukuthi isizathu sokuba ngilahlekelwe ukuzethemba kalula kanjalo sasiwukuthi ngangingenandawo kaNkulunkulu enhliziyweni yami kuphela. Ngesikhathi esifanayo, ngabuye ngafinyelela ekuqondeni ukuthi uNkulunkulu Nguye obusa isiphetho sami, futhi ukuthi ngangizokhethelwa umsebenzi noma cha kwakuncike kuNkulunkulu, nokuthi kwakungeyona into eyayinganqunywa noma yimuphi umuntu. Ngaqonda ukuthi kufanele ngethembe kuNkulunkulu futhi ngithobele izinhlelo namalungiselelo Akhe. Ngicabanga lokhu, masinyane ngezwa umuzwa wokukhululeka ongelinganiswe wehlela phezu kwami, futhi ingcindezi eyayikade inyonyobela emahlombe ami yasuka ngokushesha.
Emva kokuba ngiphinde ngaqondisa isimo sengqondo yami, ngakwazi ukungena kunhlolokhono ngokuzotha. Kunhlolokhono ngangisahlangana nemibuzo engangingayiqondi futhi kwakunezikhathi lapho ngingakwazanga khona ukukhuluma isiJaphani ngokushelelayo, kodwa ngangilokhu ngikugcinile emqondweni ukuthi ukuthi ngiyayiphasa noma cha inhlolokhono kwakusezandleni zikaNkulunkulu, nokuthi konke okwakufanele ngikwenze kwakuwukuba ngenze kahle kakhulu. Ngezwa ngaleso sikhathi ukuthi kunendlela okwakufanele ngiyilandele, futhi angibange ngisezwa ngilahlekile noma nginovalo. Emva kwezinsuku ezimbalwa, ngathola i-imeyli eyayivela enkampanini ithi ngangiyiphasile inhlolokhono yesithathu futhi ingazisa ukuthi ngokulandelayo ngangizokwenza inhlolokhono nenhloko yenkampani. Ngathokoza kakhulu. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangenza ngalazisa ngokweqiniso igunya lamazwi kaNkulunkulu, futhi ngazi ukuthi uma ngiphila ngokuhambisana namazwi Akhe, ngangiyokwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu ezimangalisayo.
Kwalandela inhlolokhono nenhloko yenkampani. Ngangisezwa nginovadlwana, kodwa ngenxa yengangihlangene nakho kuzinhlolokhono ezimbalwa ezedlule, ngangibone izenzo zikaNkulunkulu ezimangalisayo futhi ngase ngifinyelele ekuqondeni ukuthi uNkulunkulu wayeseceleni kwami, engiholela phambili. Ngakho futhi, ngasho umkhuleko kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Uyazi ukuthi anginakhono elikhulu ekukhulumeni nokuthi anginalo ulwazi nesibindi. Ngicela Kuwe ukholo namandla okuzongenza ngizwe umsebenzi namazwi Akho phakathi kwalo lonke uhlobo lwabantu, izigameko, izinto nezimo. Ngifisa ukubeka konke ezandleni Zakho….” Emva kokuthandaza, ngaqala ukuya ngokuya ngizotha. Ngazizwa ngikhululekile kuyo yonke inhlolokhono, futhi ngezwa umuzwa engangingakaze ngiwuzwe wokukhululeka emqondweni nasemzimbeni. Okwangimangalisa ukuthi, emva kwemizuzu nje kuphele inhlolokhono, umphathi womnyango we-HR wanginikeza isaziso sangaphakathi futhi wathi ngangiwutholile umsebenzi, nokuthi futhi ngizothola iholo elingaphezulu kunabanye abantu. Ngibona lo mphumela, ngajabula ngendlela yokuthi kwageleza izinyembezi emehlweni ami, futhi ngangazi ukuthi lokhu kwakuyisenzo esimangalisayo sikaNkulunkulu.
Njengoba ngicabanga emuva ngenkathi ngiqala ukucinga umsebenzi kuze kube manje, sengifinyelele ngokweqiniso ekwaziseni ukuthi uNkulunkulu wethembekile nokuthi uNkulunkulu ulapha eduze kwami, engihlinzeka futhi engiqondisa. Uma nje sethembele futhi sibheke kuNkulunkulu bese sibona umsebenzi namazwi Akhe kubo bonke abantu, izigameko, izinto nezimo esihlangana nazo, khona-ke siyokwazi ukubona izenzo zikaNkulunkulu ezimangalisayo. Makabongwe uNkulunkulu! Kulokhu okuhlangenwe nakho kokuthungatha umsebenzi, angigcinanga nje ngokuthola umsebenzi omuhle kuphela, kodwa isivuno esikhulu ngokwengeziwe kwaba ukuthi ngazuza ukuqonda ngobukhosi bukaNkulunkulu futhi ukukholwa kwami kuNkulunkulu kwanda. Ngikholwa ukuthi, kukho konke engiyohlangana nakho kuyo yonke impilo yami esasele, uma uNkulunkulu eseduze kwami futhi kukhona amazwi kaNkulunkulu ukuba angiqondise, khona-ke ngiyobhekana nakho konke ngesibindi nokuzethemba okwengeziwe!